မရေးရင်လည်း မရေးဖြစ်တော့ဘူး...။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စမိမှတော့ လမ်းဆုံးရောက်အောင် သွားပါမှ...။ ကဗျာဆရာ ဒကာတာရာမင်းဝေရဲ့ '' လွယ်အိတ်ညိုတစ်လုံးကို လွယ်ရင်း ရာဇ၀င်ထဲမှာ ခရီးဆက်ရဦးမယ်'' ဆိုသလိုပ..။ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ပုံမှန်လုပ်ပြီး ပို့တဲ့ တပည့်တွေရဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလည်း ဖတ်ရပါရဲ့..။
မသိမသာ ချောင်ကပ်ရင်း ဟိုစကြာဝဠာအနားရေးအထိ မစ္စတာဟော့ကင်းရဲ့ တွင်းနက်ကြီးထဲထိ ပုန်ရှောင်ကြလေသူတွေလည်း မနည်းပေဘူး..။ ပိုးဖလံမျိုး ပါဠိတိုး ကိုယ်ကျိုးမနည်းစေလိုတဲ့ ဂုရုတစ်ပါးကတော့ ကရုဏာတွေ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးလောက်ပွားပေမယ့် ...တပည့်ကျော်အပေါင်းက ဥပေက္ခာဆည်ကြီးနဲ့ ပိတ်ထားကြလေဟန်ထင့်...။ ရေတွေ မစီး.....။ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ မစီး...။ အထီးကျန်မင်နီတံတစ်ချောင်းနဲ့...ခြောက်ခမ်းနေတဲ့ မြစ်ကြီးထဲ...။
အော် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ....မအားချင်းကြီးမက မအားကြတာ....(ဟုတ်လောက်ပေရဲ့..) လို့သာ စုတ်တသပ်သပ် လေတချွန်ချွန် မေတ္တာတံခွန်သာ လွှတ်ရပေတော့..။
အဲဒီလိုလေးများ ဟုတ်လောက်ပါရဲ့ ဖြစ်လောက်ပါရဲ့လို့များ.. ပါဠိဘာသာနဲ့ ရေးချင်ရင် Optative (or Potential) Mood ကြိယာများကို သုံးစွဲရပါသတဲ့..။ ပါဠိသဒ္ဒါကျမ်းတွေကတော့ သတ္တမီဝိဘတ်ကြိယာလို့ အမည်တပ်ကြလေရဲ့..။ ဘုရားရှင်က မိဂဒါဝုန်ကို ဓမ္မစကြာတရားဦးဟောဖို့ အကြွလမ်းမှာ ဥပကကြီးနဲ့တွေ့တော့ ငါဘုရားဟာ ပြိုင်ဘက်မဲ့အောင်နိုင်သူ (အနန္တဇိန)လို့လည်း မိန့်မြွက်လိုက်ရော.. ဥပကကြီးက မယုံရေးချမယုံ.. ဒါပေမယ့် ယဉ်ကျေးစွာ ''ဟုတ်လောက်ပါရဲ့ ငါ့ရှင်ရယ်''တဲ့ ပြောသွားတာ ဒီကြိယာနဲ့ပဲ..။ ဟုပေယျ အာဝုသော....။
ရဲ့ နယ်ပယ်ကလည်း သင်ခန်းစာ (၁၃)မှာ ပြခဲ့တဲ့ ပဉ္စမီဝိဘတ်များလို ကျယ်ပြန့်ပါတယ်..။
ယဉ်ကျေးတဲ့မေးခွန်း( Courteous Question)နဲ့
၀တ်ပြုဆုတောင်းခြင်း( Prayer) ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေနဲ့ ဒီကြိယာတွေကို သုံးစွဲရပါတယ်..။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ may, might, should , would ဆိုတဲ့ အကူကြိယာတွေကို သုံးစွဲရမှာပ..။ မြန်မာလိုတော့ ...ဖြစ်လောက်တယ် ဖြစ်သင့်တယ် ဖြစ်ပါစေ...ဆိုတာမျိုးပေပဲ..။
ကဲ အ(a)သရဆုံး ကြိယာအခြေခံပုဒ်နဲ့ ဆက်ကြည့်..
ဒေသေ (dese) (ဟောကြား)
ကရော(karo)(ပြုလုပ်) (ထူးခြားတဲ့ ပုဒ်တွေ ပုဒ်လာတာကို သတိပြု..)
ကရေယျ (ကယိရာ၊ကရေ) --------------------------- ကရေယျုံ(ကယိရုံ)
သိယာ(အဿ) ---------------------------------------- အဿထ
စကားလုံးအသစ်လေးတွေ မှတ်ကြပေဦး..။ အသုံးတည့်မှာပါ..။
ဣတ္ထံ -ယင်းသို့အားဖြင့်..ဤနည်းဖြင့်... ဒီလိုနဲ့...(thus, in this way)
တထာ -ထိုနည်းအားဖြင့်၊ ထို့အတူ (So, in that way)
ယထာ -အကြင်သို့သောနည်းဖြင့်၊ (in whatever way, such as)
ုကထံ-ဘယ်သို့သောနည်းဖြင့်၊ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ (How?, in what way?)
သစေ -အကယ်၍ (if)
ဒီကြိယာတွေနဲ့တွဲပြီး သစေ သို့မဟုတ် ယဒိဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေ သုံးလေ့ရှိတယ်..။ ''အကယ်၍ '' ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့လေ..။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာတော့ Conditional ၀ါကျတွေလို့ ပြောရင် ထင်သာမြင်သာရှိလေမလား..။
အကယ်၍ သင် ထမင်းချက်လျင် ငါစားရပေလိမ့်မည်။
ှုIf you (would) cook , I would eat... ဆိုသဟာမျိုးပေပ..
သစေ တွံ ဘတ္တံ ပစေယျာသိ၊ အဟံ ဘုဉ္ဖာမိ။
If he would go, he is able.
သစေ သော ဂစ္ဆေယျ၊ သော သက္ကောတိ။ (သက္က=စွမ်းနိုင်)(be able)
လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ လုပ်လိုက်ရင် သဘောပေါက်သွားမှာပါ..။
မြန်မာပြန်ကြပါ (ပြည်တော်ပြန်ခြင်း မပြန်ခြင်း ပါဠိသင်ခန်းစာနဲ့ မဆိုင်.)
သော တတြ ကသေယျ။
တုမှေ ဣဓ ၀ပေယျာထ။
တေ တဟိံ သယေယျုံ။
မယံ တဟိံ ဂစ္ဆေယျာမ။
ကုတော တေ အာဂစ္ဆေယျုံ။
ကုတြ မယံ ၀သေယျာမ။
ယတြ တေ ၀သေယျုံ၊ မယံ တတြ ဂစ္ဆေယျာမ။
ယဟိံ တေ နိသီဒေယျုံ၊ တတော တုမှေ အပဂစ္ဆေယျာထ။
ပါဠိဒေ၀၊ ပါဠိဒေ၀ီများအတွက် ပါဠိဂုရုရဲ့ .ပဥှာ...
ငါ ဒီမှာ နေသင့်တယ်..
သူတို့ ဒီနေရာက အဝေးသွားကြလောက်ပြီ။
ဘယ်ကို ငါတို့ ပြေးကြပါ့..။
သူတို့ အဲဒီမှာ အောင်နိုင်ကြမှာပါ..။
ငါတို့ ဘယ်နေရာက ၀ယ်သင့်သလဲ..။
မင်း အဲဒီကို ချဉ်းကပ်သင့်တယ်။
မင်း ဒီအတိုင်းပဲ လုပ်သင့်တယ်။
မင်း ငါပြောသလို လုပ်ပါ။
Posted by ဓမ္မဂင်္ဂါ at 2:01 AM